Beesha Caalamku Siday U Aragtaa In Laba Xisbi Oo Kaliya Ay Galaan Doorashooyinka Soo Socda Ee S/land , Waddani-na Ka Hadho | Biyoguurenews.com
Home Wararka Beesha Caalamku Siday U Aragtaa In Laba Xisbi Oo Kaliya Ay Galaan...
diblomaasiyadeed oo uu wargeyska Geeska Afrika helay ayaa xaqiijiyay inay dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka diqmuraadiyadeed ee Somaliland ay indhaha ku hayaan khilaafaadka u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee ku salaysan doorashada golaha wakiilada.
Source:- Geeska wargeyska Geeska Afrika helay ayaa xaqiijiyay inay dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka diqmuraadiyadeed ee Somaliland aydiblomaasiyadeed oo uu wargeyska Geeska Afrika helay ayaa xaqiijiyay inay dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka diqmuraadiyadeed ee Somaliland ay indhaha ku hayaan khilaafaadka u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee ku salaysan doorashada golaha wakiilada.
Dalalkan ayaa aaminsan inay muhiim tahay inay isu soo dhawaadaan saddexda xisbi islamarkaana sameeyaan tanaasul siyaasadeed sidii looga bartay Somaliland. Waxa ay Wadamadani aaminsanyihiin in Somaliland galayso xaalad adag haddii aanay saddexda xisbi wada jir uga qayb gelin doorashada golaha wakiilada oo qorshaysnayd inay qabsoodiblomaasiyadeed oo uu wargeyska Geeska Afrika helay ayaa xaqiijiyay inay dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka diqmuraadiyadeed ee Somaliland ay indhaha ku hayaan khilaafaadka u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee ku salaysan doorashada golaha wakiilada.
Source:- Geeskanto March 2019 balse uu dib u dhac ku yimid, welina aan la isla qaadin wakhtigii ay qabsoomi lahayd.
Source:- Geeska indhaha ku hayaan khilaafaadka u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee ku salaysan doorashada golaha wakiilada.
Previous articleSkeeko Layab leh oo nin drawal ahi uu u xidhnaa mudo labo sano ah
Next articleFarmaajo, Madaxwaynaha dawlada xamar oo Weerar dacayad afka ah ku qaaday xildhibaanadii ka Keenay mooshinka isagoo Hortaagan